Amazon Prime Video 30 andro Fitsapana maimaim-poana (2020) - Fomba voamarina - Fialam-Boly
Ny streaming an-tserasera dia niova ho sisintany vaovao miaraka amin'ny fampidirana rindranasa streaming ho an'ny finday avo lenta toy ny Amazon Prime Videos. Aleon'ny olona ny fialam-boly tsy misy fanapahana noho ny fantsom-pahitalavitra mahazatra. Ny Prime Videos dia miaraka amina endri-javatra mahaliana ny mpampiasa. Raha ara-dalàna, ny kalitaon'ny atiny dia mahazendana fa te-hanamarina azy ny tsirairay.
Prime Videos dia mitondra andao fandaharana amin'ny fahitalavitra ankafizinao sy sarimihetsika manerantany. Tsy voatery manana fameperana isam-paritra koa ianao. Na izany aza, misy sarany famandrihana mifandraika amin'ireny leisures ireny. Raha tsy te handray an'ity famandrihana ity ianao, dia angamba ny fitsapana maimaimpoana mandritra ny 30 andro dia afaka manazava ny fisalasalana rehetra.
Midira mandritra ny 30 andro - Fitsapana maimaim-poana
Tombony azo amin'ny fitsapana maimaim-poana amin'ny horonantsary:
Fitsapana maimaimpoana mandritra ny 30 andro dia mamela an'i Amazon hanorina fahatokisana miaraka aminao amin'ny maha mpanome tolotra anao. Azonao atao ny mizaha ireo endriny sy serivisy feno azo ampiasain'ny mpikambana misoratra anarana. Noho izany, amin'ny fitsapana, azonao atao ny mijery raha ho anao na tsia ny atiny. Ireto misy antony sasany mahatonga ny fitsarana ho hevitra tsara kokoa.
Atiny maimaim-poana:Tsy misy fameperana amin'ny fitsarana mandritra ny 30 andro ny Prime Videos. Noho izany, afaka miditra amin'ny atiny feno ianao. Azonao atao ny mijery ny seho sy ny sarimihetsika, misintona azy ireo, na manisy marika azy ireo rehefa avy eo.
Fanapahan-kevitra tsara kokoa:Aorian'ny fitsapana ny fitsapana, azonao atao ny mamantatra raha mendrika ny hampiasa vola ny famandrihana Amazon Prime Video na tsia. Ny telopolo andro dia fotoana mety hahalalanao ny zavatra entin'ny Prime Videos ho eo amin'ny latabatra.
Tombontsoa amin'ny fiantsenana:Ny fitsapana horonantsary praiminisitra maimaim-poana mandritra ny 30 andro dia misy fidirana tanteraka amin'ny maha-mpikambana premium. Azonao atao ny mampiasa an'ity mpikambana ity mba hanafarana sy hiantsenana an-tserasera. Izy io dia hanome anao ny fialam-boly mitovy amin'izany ary ny tolotra mety ho azon'ny mpikambana praiminisitra hafa rehetra.
Mitsitsia vola:Na dia mikasa ny hisoratra anarana aza ianao dia tsara kokoa ny manararaotra fitsarana maimaimpoana. Toy ny hoe mahazo iray volana fanampiny ao amin'ny fonosanao famandrihana. Raha ny zava-dehibe, ahoana raha manapa-kevitra ny hiala amin'ny famandrihana ianao? Ity fitsarana mandritra ny 30 andro ity dia fomba tsara azo antoka.
Fomba ahazoana ny fitsapana maimaim-poana amin'ny horonantsary:
Azonao atao ny mitsidika ny Prime Video ofisialy na tranokala Amazon. Ny ampahany tsara indrindra amin'ny fisoratana anarana amin'i Amazon, na ny fanandramana, dia mihatra amin'ny sehatra Amazon rehetra, ao anatin'izany ireo tranonkala fiantsenana sy Amazon Music. Araho ireto dingana ireto:
Mandehana any amin'ny 'My Subscription' na 'Subscription.' Ao no hahitanao safidy hanombohana ny fitsarana maimaimpoana anao.
Raha tsy izany, matetika i Amazon dia mampiseho ireo sora-baventy hanombohana fitsapana maimaimpoana ho an'ireo tsy mpikambana. Azonao atao ny manindry an'io mba hamindra ny tenanao.
Hamarino tsara fa manana karatra mety ianao na safidy fandoavam-bola hafa avy any Amazon.
Mahitsy ny manaraka ny torolalana. Tsy maintsy misafidy iray amin'ireo drafitra hanombohana ny fitsarana ianao. Ny tombotsoan'ny andranao dia hita taratra amin'ny drafitra nofidinao.
Izay ihany no ilaina. Ny sisa ataonao dia tsindrio ny Start Trial.
Aiza no azonao ampiasana horonantsary voalohany aorian'ny fisoratana anarana hanaovana fitsapana?
Afaka mampiasa Prime Videos ianao amin'ny sehatra rehetra. Misy fampiharana finday ofisialy azo ampiasaina hampiasanao sy handefasana horonantsary amin'ny fotoana rehetra. Azonao atao ny misintona ny atiny hijerena azy aorian'izay.Raha tsy izany, afaka milalao Prime Videos amin'ny solosainao findainao na PC ianao amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny tranonkala ofisialy ary fenoy ny antsipirian'ny fidiranao. Tsy misy fameperana mafy apetraka amin'ny karazana fitaovana azonao ampiasaina.
Ny maha-mpikambana voalohany dia mivelatra amin'ny sehatra Amazon hafa. Azonao atao koa ny mankafy ny mozika Amazon amin'ny fandefasana mozika avo lenta. Ny fiantsenana any Amazon koa dia hitondra anao ny vaovao farany, ny tolotra ary ny fanavaozana. Azonao atao ny manararaotra ny fanaterana voalohany sy ny fiasa mitovy amin'izany.
Mampifanaraka ireo horonantsary voalohany:
Ny Prime Videos dia mifanaraka amin'ny rafitra miasa rehetra: Android, iOS, ary Windows. Azonao atao ny mampiasa azy amin'ny telefaona finday, PC, Takelaka na fitaovana hafa. Satria misy amin'ny endrika tranokala io, azonao atao ny mampiasa ny browser rehetra saika hidirana amin'ny atiny Amazon. Na izany aza, ny mpitety sasany dia mifanaraka kokoa noho ny hafa.
1Q. Misy ve ny fiampangana ny fitsarana mandritra ny 30 andro any Amazon?
taona:Tsy misy fiampangana tafahoatra mba hankafy ny fitsarana mandritra ny 30 andro. Na izany aza, misy fotoana izay amindran'ny Amazon vola amin'ny carte de crédit na kaontinao hanamarinana izany. Na izany aza, minimal ireo vola ireo satria mbola andrana maimaimpoana izy io. Izy io dia hiantohana ny fandoavam-bola amin'ny ho avy na ny fanavaozana ny famandrihana.
2Q. Afaka mahazo fitsapana 30 andro hafa ve aho?
taona:Amazon dia manome andrana 30 andro indray mandeha ho an'ireo mpampiasa voasoratra anarana. Raha te hanandrana andrana maimaimpoana hafa ianao dia mila mampiasa kaonty hafa miaraka amin'ny antsipirian'ny fandoavam-bola. Tsy misy fomba hampiasanao indroa ilay kaonty mitovy mandritra ny fotoam-pitsarana 30 andro.
3Q. Fanavaozana mandeha ho azy ve ny famandrihana Amazon?
taona:Eny, havaozina ho azy ny maha-mpikambana voalohany an'i Amazon taorian'ny nifaranan'ny fitsarana. Handoavanao anao araka ny drafitra nofidinao tamin'ny voalohany raha nisafidy ilay fitsarana maimaimpoana ianao. Noho izany, hevitra tsara ny hanafoanana ny famandrihana alohan'ny fiafaran'ny maha-mpikambana anao raha tsy afa-po amin'ny serivisy ianao.
4Q. Firy ny efijery atolotry ny Amazon Prime?
taona:Ho an'ny famandrihana mahazatra, afaka mivezivezy amin'ny efijery telo indray mandeha ianao, tsy misy fameperana. Izy io dia misy cross-platform, ary afaka miditra amin'ireo atiny naloanao ianao. Ka raha nandoa ny atiny HD ianao dia ho hita amin'ny sehatra rehetra, PC, finday, na zavatra hafa rehetra.
Ny famandrihana kaonty Amazon anao tokana dia miasa manerana ny tany. Noho izany, azonao atao ny mampiasa io kaonty io ihany na aiza na aiza alehanao, tsy misy ahiahy. Mihatra amin'ny fitsarana anao mandritra ny 30 andro izany. Ka raha mikasa ny hanao dia lavitra ianao rehefa mankafy an'i Amazon dia tadiavo izany.
Tsara ny manamarina zavatra foana alohan'ny hividiananao azy. Ny fizahan-toetra mandritra ny 30 andro an'i Amazon dia fandraisana andraikitra lehibe izay mametraka azy alohan'ny mpifaninana hafa. Na dia manandrana mamoaka safidy mitovy amin'izany aza ny serivisy streaming hafa, Amazon kosa dia mijanona ho ace noho ny fialambolany kaonty iray izay mety ho an'ny rehetra.
Mikasa ny hiala sasatra mandritra ny 30 andro ho avy ve ianao, sa mikasa ny hanao vakansy? Ahoana ny fomba hahazoanao an'i Amazon ho an'ny filanao fialamboly? Raiso ny andrana maimaim-poana anio ary mankafy ny atiny premium, tahiry data, ary ankafizin'ny mpianakavy nefa tsy misy fetra.
Mpianatra manolotra tokony hojerena
Ny hasarobidin'ny WAP Rapper Cardi B tamin'ny taona 2021
Taorian'ny fahatarana naharitra, Gotham Knights dia andrasana havoaka amin'ity taona ity!
tranokala fanatanjahan-tena an-tserasera tsara indrindra
Fampiharana camscanner ho an'ny fisintomana maimaim-poana amin'ny android
fomba fampidinana sarimihetsika amin'ny Internet maimaim-poana
crunchyroll avy amin'ny tontolo vaovao
kaody promo roblox ho an'ny satroka